रोचकसंसार Archives -
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:०३ November 28, 2019 mophasalnews12LeaveaComment on अब तीन महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने
काठमाडौं । बिहेका लागि केटाकेटीको मन मिल्नु पर्यो । परम्परागत बिहेमा घरपरिवारको पनि स्विकृति अनिवार्य हुन्छ । यसबाहेक बिहेका लागि कुनै परीक्षा नै पास गर्नुपर्ने नियम दुनियामा कतै सुनिएको थिएन । तर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान इण्डोनेसियामा लागू हुने भएको छ । हो, इण्डोनेसियामा बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने […]
नगर स्तरीय गीतसंगीत र नाट्य समिति गठन
२६ पुष २०७५, बिहीबार २०:२४ January 10, 2019 mophasalLeaveaComment on नगर स्तरीय गीतसंगीत र नाट्य समिति गठन
पुस २६ गते, पथरीशनिश्चे । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका अन्तर्गत गठित ‘भाषा, कला र साहित्य प्रवद्र्धन समिति’ मातहतको गीतसंगीत र नाट्य विभाग गठन भएको छ । नगरका सर्जकहरुको भेलाले गीत संगीत विभागको सदस्यहरुमा, रविन कन्दङ्वा, विक्रम राई, नेत्रप्रसाद दवाडी, सुवास राई (सन्तोष), नन्दु गुरुङ, राम विक, विकेस साउदेन, विजुला विश्वकर्मा, सम्झना राई, शुसीला खालिङ र प्रेमप्रसाद […]
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार २१:४४ October 6, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on के तालुखुइले मान्छे बुद्धिमान हुन्छ ?
कोही मान्छे तीक्ष्ण बुद्धि भएको (genius) र कोही मान्छे बोधो दिमाग भएको (stupid) हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले झुट्टा साबित गरिदिएको छ। टाउको ठुलो भएको अथवा तालु खुइले बुद्धिमानी (genius) हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। मान्छे अनुसार गिदीको वोजन अलिअलि थोरै वा धेरै हुन सक्छ, तर गिदीको वोजनले पनि genius र stupid निर्धारण गर्दैन। वास्तबमा […]
हामी अजर, अमर छैनौँ। हामी सबैलाई थाहा छ- एक दिन मर्नै पर्छ। तर यो सत्यलाई बिर्सन्छौँ र नमरेसम्म एकोहोरो दौडेको दौडेकै गर्छौँ। मृत्यु कसले देखेको छ र, हामी अहिले नै मृत्युको नजिक नहौँला। तर मृत्यु नजिकिएपछि, मृत्यु निश्चित भएपछि मानिसहरु के सोच्दा रहेछन् त? बोन्नी वेयरले धेरै वर्ष त्यसरी मृत्यु नजिक भएकाहरुको हेरविचार गर्ने काम […]
घाँस खाइदिएको आरोपमा बाख्रा पक्राउ
२८ माघ २०७२, बिहीबार २३:५७ February 11, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on घाँस खाइदिएको आरोपमा बाख्रा पक्राउ
यो दुनियामा कोही भाग्यमानी बाख्राहरुले घाँस खाइदिए बापत तलब भत्ता पाउँछन् त कोही अभागी बाख्राहरु घाँस खाइदिएको अभियोगमा पक्राउ पर्छन् । गुगलले आफ्नो कार्यालय परिसरको चौरमा पलाउने घाँस खानका लागि २ सय बाख्राहरुलाई तलब भत्ता दिएर भर्ना गरेको समाचार हामीले केहीदिन अघि मात्र पस्केका थियौँ । त्यो समाचार पढ्दा बेरोजगार मित्रहरुले आफुलाई धिक्कार्नुभयो होला, आफ्नो […]
२३ माघ २०७२, शनिबार १३:०४ February 6, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on खानीमा थुनिएका दुई कामदारलाई ३६ दिनपछि जीवितै उद्धार
स्यानडोङ । चीनमा खानीमा थुनिएका दुई कामदारलाई ३६ दिनपछि जीवितै उद्धार गरिएको छ । उनीहरु चीनको पूर्वी ईलाका स्यानडोङ प्रान्तमा अवस्थित एक खानी भासिँदा जमिनमुनि विगत ३६ दिनदेखि थुनिएर रहेका थिए । सन् २०१५ को डिसेम्बर २५ गते खानीभित्र पुरिएका थिए । उद्धार कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीले जमिनमुनि पुरिएकै अवस्थामा रहेका अन्य दुई कामदार पनि जीवितै […]
चीनमा अनौठो चलन
२३ माघ २०७२, शनिबार १२:५८ February 6, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on चीनमा अनौठो चलन
हिडाइका लागि चीनमा अनौठो चलन सुरु भएको छ । हिड्दा मान्छेले जनावरको नक्कल गर्न थालेका छन् । चिनियाँ न्युज सर्भिसका अनुसार पूर्वी सहर झेगझाउका मानिसहरु हिड्दा चार हातपाउ टेकेर हिड्न थालेका हुन् । हातमा बाक्लो पञ्जा लगाउने र त्यसपछि हात खुट्टा टेकेर हिड्न थालेका छन् । हेर्दा अनौठो देखिने यो विधि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ […]